Abuurista muusikada – Windows – Vessoft
MuseScore – tifatire muusig oo dhammaystiran oo ka mid ah natiijooyinka muusikada ee leh hawl qabad ballaaran. Softiweerku wuxuu keydiyaa ama soo dejinayaa qaababka kala duwan ee qaybaha muusikada oo leh nidaam goobitaan oo horumarsan.
CuteDJ – Dj-istuudiyaha si loo abuuro qoraallo muusik oo lagu daro qalab fara badan. Softiweerku wuxuu xaqiijinayaa tayada taranka codka ee noocyada maqalka ee kala duwan.
Software inay la shaqeeyaan music jawabo kala duwan. Software waxay leedahay qalab iyo saamaynta music abuurista xirfad badan.